Apple waxay daabacdaa fiidiyow cusub oo muujinaya habka sawirka ee iPhone X | Wararka IPhone
Apple waxay dib ugusoo daabaceysaa fiidiyow cusub kanaalka rasmiga ah ee Youtube. Iyo sida munaasabadaha kale, wuxuu doonayaa inuu markale xoojiyo awooda qaado sawirada qaabka sawirka adoo adeegsanaya iPhone X. Markan wuxuu cinwaan uga dhigay "iPhone X, daraasad ku jirta jeebkaaga."
Kooban, kooban. Kuwani waa fiidiyowyadi ugu dambeeyay ee Apple ay soo gelineyso kanaalka YouTube-ka. Iyaga ayaga waxay rabaan inay muujiyaan astaamaha ugu wanaagsan ee alaabtooda. Waayadan dambe ipadka iyo iPhone labaduba waa halyeeyada. Iyo barnaamijkan ugu dambeeya waxaan ku aragnaa inay ku celcelinayaan qaabkooda calanka: iPhone X iyo awoodda ay ku qaadi karto sawirro tayo sare leh iyo wixii xigay - oo dhammaystiran— tafatir.
Sida laga soo xigtay Apple - ama taasi waa waxa ay rabto in aan ku fahanno ku dhawaaqitaankeeda ugu dambeeya - waa taas Ku qaadashada iPhone X jeebkaaga waxay la mid tahay haysashada istuudiyaha sawirada la qaadan karo oo had iyo jeer la heli karo. Waxaan sidoo kale baari karnaa sida isticmaalaha iPhone uu doonayo inuu u helo a shakhsiyaadka Iyo waa maxay waqtiga ugu fiican ee lagu muujiyo fursadaha kala duwan ee aan yeelan doonno marka mid lagu sameynayo qaabka sawirka.
In kasta oo si gaar ah loo qeexayo, Apple wuxuu diiradda saarayaa wajiga iftiinka istuudiyaha -Iftiinka sawirka-, mid ka mid ah siyaabaha kala duwan ee loo saxo sawirkeena loona tirtiro dhamaan waxyaalaha aan ku heysano wajigeena. Sidoo kale, haddii aad leedahay iPhone X, saameyntan waxaa lagu fulin karaa kamaradda hore iyo gadaal iyo kamaradda weyn. Intaas waxaa sii dheer, dhammeystirka sawirka wuxuu noqon karaa labadaba inta lagu jiro toogashada iyo kadib. Sida laga soo xigtay Apple, isticmaal algorithm ay ku gaari karaan iftiinka ugu fiican ee ku saleysan astaamahaaga.
Ugu dambeyntiina, xusuusnow in kastoo moodooyinka ugu dambeeyay ee Plus aad ku sameyn karto qaab sawir ah, kaliya leh iPhone X iyo iPhone 8 Plus Waad fulin kartaa saameyntaan "Portrait Lighting".
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka IPhone » Terminalka IPhone » iPhone X » Apple waxay daabacdaa fiidiyow cusub oo muujinaya habka sawirka ee iPhone X
Hadda waxaa laga heli karaa PUBG khariidadda lamadegaanka cusub ee Miramar oo ay weheliyaan tiro badan oo astaamo cusub ah